Xildhibaanada Baarlamaanka oo cod u qaadaya qodobada wax ka bedelka Dastuurka – STAR FM SOMALIA
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah ku kulmaya xarunta Golaha shacabka, iyagoo kaga doodaya ajandayaal dhowr ah oo hor-yaala, kuwaasoo ah sharciyo horay loo soo gudbiyay.
Xildhibaanada ayaa amanda cod u qaadaya mashruuca qodobada wax ka bedelka Dastuurka, kaasoo muddooyinkii u dambeeyay laga lahaa wada tashiyo dadweynaha lagala yeelanayay dib u eegista dastuurka iyo wax ka bedelka qodobada qaar.
Illaa 10 cutub oo ka mid ah dastuurka ayaa la sheegay in qodobada qaar lagu sameeyay wax ka bedel, waxaana marka la codeeyo lagu wadaa in mustaqbalka soo socda loo qaado afti dadweyne.
Sidon kale Xildhibaanada ayaa ka doodaya qodobo kale oo muhiim ah, waxaana lagu wadaa in inta lagu guda jiro bisha Ramadaan inay meel mariyaan sharciyo dhowr ah oo hor-yaala.
Guddoonka Baarlamaanka ayaa dhowaan cadeeyay inay lagama maarmaan tahay in Xildhibaanada ay meel mariyaan sharciyada hor-yaala inta lagu guda jiro kalfadhiga 8aad.
Maalin ka hor ayay aheyd markii Baarlamaanka uu ansixiyay sharciga asxaabta siyaasada oo ahaa mid muddo la sugayay, waxaana nidaamka xisbiyada badan la doonayaa inuu qaabka qabaliga, isla markaana loo gudbo xisbiyo siyaasadeed oo dalka ka hana-qaada.